Isiseko seFotohop: Ungayicima njani ifoto | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Isiseko seFotohop: Ungayicima njani ifoto
UJose Angel | | ngokubanzi, Photoshop, Tutorials
Ukwenza iifoto ezahlukeneyo ngefoto eqhelekileyo, siya kuyidinga ifoto. Iya kuhlala ifotwa Esinye sezona ziphumo zisetyenzisiweyo ngoku kwi-instagram kukwenza ukuba amalungu omzimba anyamalale okanye awenze abonakale. Kodwa ayizukuba njalo kuphela, uyakufuna iifoto ezimbini Casi kulingana
Isiseko, xa ujonga iifoto zamagcisa kuthungelwano lwentlalo kubonakala kuyinto enzima kakhulu. Kodwa emva kwesi sifundo, uya kuyenza ngokutyibilikayo. Kwaye unokuba nomona ngabahlobo bakho! Ndiza kunika umzekelo woko ndikwenzileyo ngokwam, ukusinika umbono.
Ngoku ukuba ufumana umbono wento endithetha ngayo, akunjalo? Njengoko uza kubona, ayingomzimba wam kuphela ophindwayo, kodwa kukwakho ukukhanya, izithunzi kunye neenkcukacha ezinje ngomsi okanye udonga lwangasemva. Kwaye nangona siza kuthiya nayo loo nto, ayizukuba yeyona nto ibalulekileyo kweli nqaku. Siza kugxila kwinto ekufuneka siyenzile.
1 Okokuqala, ukufota (kunye ne-tripod)
2 Ukufikelela kwi-Photoshop
3 Izixhobo zokusebenzisa
4 Olunye uchukumiso olongezelelekileyo
5 Isiseko seFotohop
Okokuqala, ukufota (kunye ne-tripod)
Ukuze ukwazi ukusebenza kwifoto yolu hlobo, kuya kufuneka ukhethe imeko-bume kwaye uthathe iifoto ezimbini. Sithetha ntoni? Ewe kuya kufuneka uthathe indawo yokuma kwaye ubeke umfanekiso ofotyiweyo kunye nento eza kusebenza. Oko kukuthi, ukuba ufuna ukuba abambe, kuyakufuneka ubeke umntu othile «Isitulo»Apha ngezantsi kufuneka ube nokuphakama okuyimfuneko. Njengoko ndiza kukubonisa kwezi foto zilandelayo. Kufuneka igxininiswe into yokuba kufuneka ibe ne-tripod kunye nefoto emileyo ngokupheleleyo kuba ekukhohliseni zombini iifoto kuya kufuneka zilingane ngokupheleleyo. Ngoku uza kubona.
Emva koku, susa imifanekiso kunye nenkxaso efanelekileyo kwisakhelo sefoto Njengoko siza kubonisa kulo mfanekiso ulandelayo, oya kuthi usetyenziswe njengesalathiso ukuze kupheliswe inxenye yomfanekiso ophambili kunye nokudala iziphumo. Emva kokufumana ezi ntlobo zeefoto, sinokugcina ikhamera kubhaka, singene kwisithuthi esihambelanayo kwaye siye kwiscreen sekhompyuter esiyichukumisayo. Kule nto ndiza kusebenzisa i-photoshop, nangona iinkqubo ezinjenge-Affinity zinokuyisebenzela. Ndikhethe umfanekiso omtsha wale meko kwaye siya kusebenza nayo.
(Uxolo ukuba ifoto itshiswe kakubi)
Songeza umfanekiso kunye nomlinganiswa ophambili kwiscreen seFotohop kwaye kwenye ithebhu sibeka umfanekiso kuphela ngasemva. Emva koko sitsala umfanekiso ongasemva kwithebhu kunye nomfanekiso ophambili wemodeli kwaye sibeka umaleko ongezantsi (ngaloo ndlela ubona owona mfanekiso uphambili).
'Iqela 1' akukho nto iyimfuneko kule nkqubo, ziinzame ezenziwe ngaphambili kuphela.
Izixhobo zilula kakhulu: Sebenzisa isigqumathelo sobuso kunye nebrashi. Kuyacetyiswa ukuba usebenzise ibrashi eqhelekileyo, ngaphandle kokuba yinto eyodwa oyisebenzisileyo njengesalathiso. Ngokwesiqhelo, i-100% ye-opacity kunye ne-voila.
Isixhobo sokugcina imaski sisetyenziselwa ukufihla okanye ukubonisa umaleko osetyenziswa kuwo. Isigqumathelo sinemisebenzi emininzi kwaye iluncedo kakhulu. Siza kushiya ikhonkco ukukubonisa ukuba kunganjani
Ewe, ukuba sihamba kumaleko aphambili, sidibanisa imaski yomaleko, kwiqhosha elisezantsi lasekunene le-photoshop (njengoko kubonisiwe kumfanekiso ongaphambili ngombala obomvu). Nje ukuba senziwe siyasebenza kuyo. Siza kuqwalasela imibala yebala. Umbala omnyama ngaphambili kunye nombala omhlophe ongasemva. Njengoko ividiyo ichaza, umnyama usetyenziselwa ukufihla. Ewe, imaski yomaleko kufuneka ingabinanto, ukuze isebenze kuyo. Ukuba yonke into ilungile, sithatha ibrashi, imilo oyikhethayo, nge-opacity ye-100% kwaye siya kwindawo yokufihla. Kule meko yokufunda, siza kuwususa umgqomo ukuze intombazana ibonakale ngathi ivuza umoya.
Imiphetho nganye yento esusiweyo kuya kufuneka icaciswe kakuhle ukuba ufuna ukufikelela kumnqweno ofanelekileyo. Zama ukungashenxisi ezinye iindawo zomfanekiso eziyimfuneko ngakumbi njengeenyawo zentombazana. Ewe, ukuba wenze impazamo, unokulungisa ngokutshintsha umphambili kunye nemibala engasemva. Ukubeka umphambili omhlophe kunye nemvelaphi emnyama kunye nokudlulisa ibrashi ngaphezulu kwendawo esuswe ngokungalunganga.
Olunye uchukumiso olongezelelekileyo
Xa unayo yonke into echazwe kakuhle ungawubuyisa kwakhona umfanekiso, njengoko uza kubona apha utshisiwe, siza kunika imizekelo emincinci yendlela yokucacisa umfanekiso ukuze uphume ngcono.
Inkqubo ye-HDR okanye i-Hyperrealism okanye i-Leftovers / i-highlights yeyona ixhaphakileyo kolu hlobo lokufota. Ukuba awufuni kuyitshisa kakhulu intloko, yiya kwezi zixhobo kwaye unokuba nakho ukubamba ubuchwephesha kunye nokukhawuleza. Yinto efanayo neefilitha zesicelo, ngokuchukumisa okufihlakeleyo- mhlawumbi-. Ezi zixhobo zikumfanekiso / uhlengahlengiso, njengoko uninzi lwenu sele nilwazi. Esinye isixhobo esisetyenziswa ngokubanzi ngamanqanaba kunye neegophe (ezikwi-tab enye). Ukuba ifoto yakho itshisiwe -nje yimeko yethu-, iya kuyenza mnyama ngakumbi kwaye ingakhangeleki kakubi. Kodwa ungabaphathi gadalala, inokubonakala ingeyonyani.
Enye indlela ikwayokudlala ngeebrashi okanye izixhobo zokucoca ulwelo. Ukuba urhuqa ibrashi kwindawo ethile kwaye ukhethe uhlobo lwesigqubuthelo osinikayo, (ukukhanya okuthambileyo kuhlala kusebenza ukuthambisa imivumbo yebrashi enikwe umfanekiso) unokwenza isiphumo osifunayo. Apha ndikunika umzekelo womfanekiso woqobo kunye nomfanekiso ophindwe ngokutsha, njengoko ubona ukuba ufumana into engaphantsi kobunzima. Nangona okuninzi okunokuphuculwa. Nokuba, ngoku, ukubeka isithunzi ebesingabikho ngaphambili.
Ngokuqinisekileyo uninzi lwenu abalandela iinethiwekhi mihla le bayibonile le nto kwaye bazibuza ukuba inganjani, kuba njengoko ubona, ukuba sisiseko sefoto. Ayithathi ixesha elininzi ukuyila kwaye azikho zixhobo zininzi zokusebenzisa, ibrashi kunye nemaski yomaleko. Oko kufezekiswa ngokulula ngefotoshop. Amaphepha amaninzi anazo. Into eqhelekileyo kolu hlobo lwenkqubo kukuba iingxaki ziyavela kumalinge okuqala, kumagqabantshintshi ungashiya amathandabuzo akho kwaye ndiza kuphendula ngovuyo ukuze ube nesiphumo esonelisayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Isiseko seFotohop: Ungayicima njani ifoto
UHernan uDuke Alvarado sitsho
Phendula uHernan uDuke Alvarado
Umnyama kunye nomhlophe kunye nokufota umbala
Yeka ukucinga ngesicelo kwaye uqalise ukuzoba amava